सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र इन्द्रावतीमा पानीको बहाव बढे, सतर्क रहन आग्रह! – कर्णाली 24 डट कम
Karnali 24५ असार २०७८, शनिबार ०७:५७
सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र इन्द्रावती नदीमा पानीको बहाव बढेको भन्दै स्थानीयहरुलाई सतर्क रहन प्रहरीले आग्रह गरेको छ ।
शुक्रबार साँझ साढे ८ बजेदेखि खोलाको बहाव बढेकोले जोखिम कायमै रहेको बताइएको छ । मेलम्ची प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक टीकाराम राईले आसपासका जोखिमयुक्त क्षेत्रका मानिसहरुलाई माइकिङ गरेर सुरक्षित स्थानमा सारिएको बताएका छन् ।
वर्षाको अवस्था सामान्य भए पनि नदीमा बाढी फेरि आउन थालेको भन्दै स्थानीयहरु त्रसित देखिएका छन् । प्रहरी निरीक्षक टीकाराम राईका अनुसार बिहीबारको भन्दा शुक्रबार साँझ बढी बाढी आएको छ । तर बाढीको मात्रा पहिलो दिनको भन्दा केही कम रहेको बताइएको छ ।
हेलम्बु क्षेत्र लगायत उपल्लो भेगका स्थानमा यातायातको सम्पर्क समेत टुटेकाले बाढीको क्षतिबारे पूर्ण विवरण आइसकेको छैन । तीन दिनअघि याङ्ग्री र लार्के नदीमा आएको भीषण बाढीले हेलम्बु तथा मेलम्ची क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ ।
राउटे युवतीहरुको वयान र स्वास्थ्य परीक्षण सकियो।
३ असार २०७८, बिहीबार १२:३७
१० असार २०७८, बिहीबार २०:१०
चितवनमा कोरोना संक्रमित ३५ बर्षे युवकले गरे आत्महत्या।
२३ बैशाख २०७८, बिहीबार ०९:१६
गायिका इन्दिरा जाेशिले काे संग गरिन् सुटुक्क इन्गेजमेन्ट? ५ असार २०७८, शनिबार ०७:५७
चितवनमा माेटरसाईकल “ग्राहकको मागअनुसार ब्राण्ड, रङ्ग, मोडल खोजी खोजी चोरी ५ असार २०७८, शनिबार ०७:५७
यस्तो हत्यारालाई के गर्नुपर्छ? ‘टाउको, घुँडाभन्दा तल र कम्मरभन्दा माथिको भाग अझै भेटिएको छैन्:प्रहरी ५ असार २०७८, शनिबार ०७:५७